🥇 Ukubalwa kwama-akhawunti ngokugcwaliseka kwama-oda
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 948
Ividiyo yokubalwa kwemali yokugcwaliseka kwama-oda
Oda ukubalwa kwemali ngokugcwaliseka kwama-oda
Imenenja ngayinye enakekela inkampani yayo ilawula zonke izinqubo zokukhiqiza, ukugcina ithrekhi yokugcwaliseka kwama-oda, ukwenza lula nokwenza ngcono umsebenzi wenhlangano nabasebenzi, kunciphisa izindleko. Kuphela ngokulawulwa okugcwele nokuhlala njalo, ukuphathwa, kanye nokugcwaliseka kwawo wonke ama-accounting accounting, kungenzeka ukufeza izinhloso ezibekiwe futhi wandise umkhiqizo futhi ngasikhathi sinye inzuzo. Kulesi sigaba senqubekela phambili kwezobuchwepheshe, kucatshangelwa umncintiswano okhula njalo, kuyadingeka ukwethula uhlelo oluzenzakalelayo ekugcwalisekeni kwama-oda, ukunciphisa isikhathi esisetshenzisiwe nezinsizakusebenza zezezimali. Kepha, qaphela kakhulu lapho ukhetha uhlelo lokubalwa kwemali, ngoba akufanele lusheshe kuphela, kodwa futhi lube nekhwalithi ephezulu, luzisebenzele, lusebenze ngezinto eziningi futhi lusebenzise abasebenzisi abaningi, ngenkathi lungabizi kakhulu futhi okungcono uma kungekho mali yanyanga zonke. Ucabanga ukuthi akunakwenzeka ukuthola uhlelo olunjalo lwe-accounting? Akulungile. Uhlelo lwethu oluyingqayizivele lwe-USU Software luhlangabezana nezidingo zomsebenzisi okhetha kakhulu onolwazi oluyisisekelo lwesoftware, ngokutshalwa kwemali okuncane. Uhlelo lokubalwa kwemali luzivumelanisa ngokushesha nomsebenzi ngamunye, kucatshangelwa izifiso zomuntu siqu nezikhundla zomsebenzi. Imodi yabadlali abaningi nayo ayikugcini ulindile futhi ivumela ukonga imali kuzinhlelo zokusebenza ezingeziwe. Izindleko eziphansi, uma kungekho mali ekhokhwa nyangazonke, nazo zihlukanisa uhlelo lwethu nezinhlelo zokubalwa kwama-oda ezifanayo.
Umsebenzi omkhulu emsebenzini webhizinisi ngalinye ukubalwa kwemali nokulawulwa kwama-oda. Kungukukhokhwa kwabo okufika ngesikhathi nokulawula ukukhokha ngaphezulu kwemali okuyisisekelo nokuqiniswa kobudlelwano bokuthembana namakhasimende, futhi lokhu kuyisihluthulelo sempumelelo. Uhlelo lwethu oluzenzakalelayo luvumela ukuzenzakalela zonke izinqubo zokukhiqiza, ukuhlaziya nokwenza ngempumelelo imisebenzi eqediwe ngesikhathi, kucatshangelwa izaziso ezitholwe ngaphambilini, ngenxa yokubalwa kwemali ku-task planner. Ngakho-ke, ngenxa yohlelo lokubalwa kwamakhompiyutha, ukugcwaliswa kwemisebenzi ngezicelo ezenziwe ngabasebenzi kuncishisiwe, kucatshangelwa isici somuntu (ubudedengu, ukukhathala, njll.). Ngokubalwa kwamahora okusebenza, awugcini nje ngokulawula imisebenzi yabasebenzi, ngokuya ngokuthi kubalwa malini amaholo, kepha futhi uyala nabasebenzi.
Ukugcina amatafula ahlukahlukene kuvumela ukufaka imininingwane ngekhwalithi ephezulu futhi kuyigcine iminyaka eminingi. Ukungenisa idatha kwenziwa kusuka kwimidiya eyahlukahlukene, engagcini nje ngokwethula imininingwane kepha futhi nekhwalithi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lapho usebenza ngama-oda e-elekthronikhi, athunyelwa ngokuzenzekelayo kumatafula nakumajenali adingekayo, enikeza abasebenzi ukufinyelela ngokuya ngesikhundla somsebenzi. Manje ngeke kuthathe isikhathi esiningi nomzamo ukuthola izinto ozidingayo, kucatshangelwa ukusetshenziswa kwenjini yokusesha yokuqukethwe.
Eqinisweni, i-USU Software yenza imisebenzi eminingi futhi ingalekelelwa ngamamojula ahlukahlukene ngokucela kwakho, okutholakala kuwebhusayithi yethu. Futhi, kukhona uhlu lwamanani nencazelo yezinhlelo, ngezibuyekezo zamakhasimende. Ngemibuzo eyengeziwe, ababonisi bethu bayakujabulela ukukweluleka ngezinombolo zefoni ezikhonjisiwe.
Ukubalwa kwezimali kokugcwaliseka kohlelo lwama-oda kuqinisekisa ukuphepha nokulawulwa okuthembekile kwemisebenzi yonke. Ukwenza okuzenzakalelayo komsebenzi nohlelo lwezicelo kunikeza imisebenzi eminingi. Ukugcwaliseka kokubalwa kwama-oda ahlukahlukene, kucatshangelwa ukunakekelwa kwamatafula ngezindlela ezahlukahlukene. Uhlelo lwe-accounting lunezici eziningi ezithile njengezaziso nezikhumbuzi, ukugcwaliswa kwama-oda, kusetshenziswa isihleli somsebenzi, ukufakwa kwedatha nokungeniswa okuzenzakalelayo, indawo yokugcina impahla kanye ne-accounting yezezimali, umsebenzi wokude usebenzisa uhlelo lweselula, ukwahlukaniswa kwamalungelo omsebenzisi, ukugcinwa, kanye ukucutshungulwa kwedatha kuseva ekude, elula ne-camphor kuwo wonke umqondo we-interface, kuyaqondakala kuwo wonke umsebenzisi, kusebenza ngama-oda we-elekthronikhi nokugcwaliseka kokusebenza, ukuqapha isimo sokucubungula, isiteshi sokufinyelela sabasebenzisi abaningi lapho unikeza ukungena ngemvume ne-password. Thuthukisa isiyalo ngokuqapha njalo nokubalwa kwemali kwemisebenzi yabasebenzi, usebenzisa ukulandelela isikhathi nokuhlanganiswa namakhamera wevidiyo.
Umbuso une-accounting elula nokuzula. Ukuhlaziywa nezibalo kwenziwa ngokuzenzakalela. Izinkokhelo zingamukelwa ngokheshi nangefomu okungeyona imali. Ngokwemiphumela yomsebenzi wabasebenzi, kubalwa amaholo. Ungathola imininingwane ngokushesha, ucabangela injini yokusesha engokomongo.
Njengamanje, ukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende obusebenzayo kuya ngokuya kuba isu lokuthi kube nempumelelo nokuthuthuka okuqhubekayo kwezinkampani zesimanje. Ukugxila kwezinkampani ekwenzeni ngcono ubudlelwane bamakhasimende kungenxa yamathrendi amaningi, ikakhulukazi, ukwanda komncintiswano, izidingo ezandisiwe zamakhasimende zekhwalithi yemikhiqizo enikezwayo nezinga lenkonzo, ukwehla kokusebenza kwamathuluzi wokuthengisa wendabuko, kanye nokuvela kobuchwepheshe obusha bokuxhumana namakhasimende nokusebenza kwezigaba zenkampani. Yingakho inkinga yokuhlela nokuqinisekisa ukusebenza ngempumelelo namakhasimende ishesha kakhulu. Lokhu kubeka izidingo zayo kwikhwalithi yesevisi, futhi kuqala ezintweni ezinjengejubane lokuhlinzekwa kwamakhasimende, ukungabikho kwamaphutha, kanye nokutholakala kolwazi mayelana nokuxhumana kwangaphambilini kwekhasimende. Izidingo ezinjalo zingahlangatshezwa kuphela ngokusebenzisa i-automated data processing system. Emakethe yesoftware yesimanje, kunezinombolo eziningi zezinhlelo zokuqopha ukugcwaliswa kwama-oda, kubalwa inani lezaphulelo nezinzuzo, kepha iningi lazo ligxile endaweni ebanzi kakhulu futhi alinaki imininingwane ethile ibhizinisi. Ezinye zazo zintula ukusebenza okudingekile, ezinye zinemisebenzi ‘eyengeziwe’ okungekho phuzu ekuyikhokheleni, konke lokhu kudinga ukuthi kuthuthukiswe isoftware ngayinye yezidingo zenhlangano. Kodwa-ke, esakhiweni esiklanywe ngokukhethekile esivela ku-USU Software, uzothola kuphela okudingeka kakhulu futhi okuwusizo kuwe nakumakhasimende akho.